कोरोनाको कहर दशैँमा पनि, गाउँघरमा छैन रमाइलो ! - Arthasansar
आइतबार, ०९ कार्तिक २०७७, १६ : ४६ मा प्रकाशित
सुशीला रेग्मी, काठमाडौं - हिन्दू धर्मावलम्वीहरुको ठूलो पर्व विजया दशमी दुर्गा भवानीको प्रसादस्वरुप मान्यजनका हातबाट टीका र जमरा लगाएर धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको विजया दशमी पर्व भने कोरोनाको कहरका कारण गाउँघरमा त्यति रमाइलो छैन । आज नवमीको दिन पनि गाउँघर सुनसान छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ “घरबाट बाहिर निस्कने परिस्थिति छैन, गाउँघरमा पनि दशँैको बिगतका वर्षमा जस्तो उमङ्ग र रौनकता देखिँदैन, यस पटकलाई कोरोनाको कहरले गर्दा घरभित्रका परिवारबीच मात्र सहभागी भएर दशैँ मनाउनेछौँ” ।
उहाँले आपूmले जानेबुझेदेखि नै गाउँका साथीभाई जम्मा भएर जङ्गलमा काठ काटेर चर्खे पिङ बनाउँदा निकै रमाइलो भएको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै अहिले भने गाउँघर कतैपनि देख्न पनि नपाएकोमा गुनासो गर्नुहुन्छ ।
आजभोलिको युवापुस्ताको पनि पिङप्रति त्यति आकर्षण छैन । साना बच्चाका लागि बजारमा आएका प्लाष्टिकको डोरी बाँधेर घर घरमा पिङ राख्ने चलन भने बढ्न थालेको छ । तर बाबियो काटेर पिङ बाट्ने चलन पछिल्लो समय रामपुर क्षेत्रमा बिस्तरै कम हँुदै गएको छ ।
गाउँघरमा चनचल्तीमा आएको चर्खे पिङ, लिङ्गे पिङ र घुमाउने पिङ खेलेर मज्जा लिँदै आफन्त, साथीभाई भेटघाट हुने र शुभकामना आदानप्रदान गर्ने चलन रहेको थियो । कामको व्यस्तता, बाह्य संस्कृतिको प्रभाव, पिङप्रतिको मोह कम हुँदै जादा अहिले गाउँघरबाट परम्परागत हाम्रा चाडपर्व झल्किने खालका संस्कृति पनि लोप हुँदै गएको देखिएको छ । रासस
यी १० कम्पनीका सेयरधनी सोमबार भए मालामाल
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप २४ जनाको मृत्यु
मंगलबार थप १७९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कति डिस्चार्ज भए ?
मनकामना केबुलकार २३ औं वर्षमा प्रवेश, सेवा छिट्टै पुनः सञ्चालनमा आउने
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप १६ जनाको मृत्यु, कति पुगे मृतक ?
जोखिम बहन गर्न सक्ने गरि लगानी गरौं
७ अर्बको कारोबार भएको दिन यी १० कम्पनीका लगानीकर्ता सवै भन्दा धेरै मख्ख !
सेयर बजारमा रेकर्डै रेकर्ड, लगानीकर्ता मालामाल हुने मौका !
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले गर्यो लाभांश घोषणा